प्राकृतीक विपदका घटनामा क्षती, सरकारले पक्षपाती काम गरेको गुनासो – Enayanepal.com
कालिकोट जिल्लाको पलाता गाउँपालिकाको वडा नं. एकमा २०७५ पुस ८ गते शनिबार राती भीषण आगलागी भयो । उक्त आगलागीमा परि ३२ घर जलेर खरानी भए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै गृहजिल्लामा यत्रो क्षति भएपछि प्रदेश सरकार तात्तियो । सरकारले राहत, उद्धारका लागि कुनै कसर बाँकी राखेन । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग गर्न तत्काल बैठक बसेर नै आव्हान ग¥यो । प्रदेश सरकारले त्यतिबेला त्यहाँका लागि आधा दर्जन बढि पटक हेलिकप्टर उडायो । राहत र उद्धारका सामाग्रीको लाईन लगाइयो । त्यतिले नपुगेर प्िरदेश सरकारले प्रति घर पाँच लाखका दरले राहत उपलब्ध गरायो । प्रदेश सरकार नजिकको सरकार भएको भन्दै उतिबेला प्रदेश सरकारको हाइ हाई भयो । सबै मिडियाले प्रमुखताका साथ समाचार छापे, सरकार मख्ख भयो । सरकारको मन्त्री परिषदको २०७५ पुस १४ गते बसेको बसेको बैठकले उक्त रकम दिने निर्णय गरेको थियो । घटना घटेको एक हप्ता नवित्दै सरकारले उक्त निर्णय ग¥यो ।
२०७४ फागुन ६ गते मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको थियो । सोही महिनाको १९ गते हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका एक भतनुमाका ३० घर मध्ये २५ घर जलेर नष्ट भए । लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीकै नेतृत्वमा ११ जनाको टोली पुगेको थियो । आगलागीबाट लुगाकपडा, अन्नलगायत सम्पूर्ण समान सखाप भएको थियो ।त्यहाँ भएको ठूलो क्षतिको प्रदेश सरकारले केहि पनि गर्न चाहेन । त्यो घटनामा पनि सरकारले जति सक्रियता देखाउनुपर्ने थियो देखाएन ।
२०७७ साल असार २५ गते जाजरकोट गाउँपालिकाको बारेकोट वडा नं. ४, ५, ६ मा भीषण पहिरो गयो । पहिरोले ५५ घर पूर्ण रुपमा क्षति गरेको छ भने ४२३ घर चर्केका छन् । पहिरोको उच्च जोखिममा ४७७ घर रहेका छन भने जोखिममा १९७ घर रहेका छन् । घटनामा परि १४ जनाको मृत्यू भएको छ । दुइ युवा अहिलेपनि वेपत्ता छन् तर प्रदेश सरकारले उक्त घटनालाई सामान्य रुपमा लिएको पाइएको छ । ‘मुख्यमन्त्री शाहीको गृहजिल्लामा यति ठूलो घटना भएको भए अहिलेसम्म त्यहाँ संस्था देखि सहयोगीहरुको लाईन लाग्थ्यो । यहाँ पीडितले न त खान पाएका छौं । न त लगाउने कपडा नै छ । विद्यालयको कक्षाकोठालाई घर बनाई बसेका छौं ।’ वारेकाट चारका एक पहिरोपीडितले भने, ‘प्रदेश सरकार हाम्रा लागि हो कि भनेको रहेनछ् । सरकारको आफ्नालाई हेर्ने चरित्र अझै कम भएको रहेनछ् ।’
आफ्नो जिल्लामा भए उद्धार र राहातमा छिटो रेसपोन्स गर्ने गर्न पठाउने कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले सिंगो जाजरकोटको वारेकोट रोइरहेको समयमा राहात र उद्दारमा चासो नदेखाएको त्यहीका जनप्रतिनिधीहरुले गुनासो गरेका छन् । सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद संघीय सरकारमा वन मन्त्री पनि छन् । ‘वनमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायतका टोली आए तर उनीहरुले दिएको राहात र अन्य सामाग्रि पनि प्रयाप्त भएन ।’ वारेकेटका स्थानीय मनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘पीडितलाई आश्वासन होइन, राहत चाहिएको छ । पाल चाहिएको छ चामल चाहिएको छ । नेताहरुको चिल्ला भाषणले केहि हुनेवाला छैन ।’ प्रदेश सरकारले मृत्यू भएका परिवालाई राहत दिने भनेर भनेपनि त्यो लिखित रुपमा निर्णय गरेको छैन । मृत्यू भएका परिवारलाई गाउँपालिकाले क्रियाखर्च भनेर २५ हजार उपलब्ध गराएको छ । त्यो वाहेक पहिरोले वितण्डा मच्चाई बेघर बनाएको १७ दिन पुग्दा पनि न प्रदेश सरकारले राहत पु¥याएको छ न त उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि कुनै काम नै गरेको छ ।
सोही स्थानबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभामा अर्थ, प्राकृतिक श्रोत तथा साधन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा गणेशप्रसाद सिंह निर्वाचित भएका छन् । उनी घटना घटेको भोली पल्टै घटना स्थलतर्फ गए । उनी साउन १० गते शनिबार राती मात्रै वीरेन्द्रनगरमा आएका थिए । ‘त्यहाँको अवस्था हेर्दा दयनीय छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले केहि रातह दिएको छ । हामीले केहि राहत लिएर गएका थियौं । त्यो पर्याप्त छैन ।’ उनले आइतबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै दुखेसो पोखे, ‘एक हजार ५५ घर परिवार विस्थापित बनेका छन् । यो सिंगो कर्णालीका लागि विपद हो ।’
वारेकोट गाउँपालिकाले क्षति विवरण संकलन गरिसकेको उनको भनाई छ । ‘६ करोड ४८ लाख १७ हजार बराबरका घर भत्किएका छन् । एक करोड ३६ लाख ४४ हजार चार सय बराबरको शौचालयमा क्षति पुगेको छ । ४१ लख ८० हजार बराबरको खानेपानी संरचना बगेको पाइएको छ भने जम्मा आठ करोड ८८ लाख ८६ हजार ४ सय बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।’ उनले भने, ‘त्यहाँ बस्ने नागरिकको ज्यू धन रक्ष ागर्नकालागि या त उपयुक्त स्थानमा बसाई सार्न आवश्यक देखिएको छ भने त्यहि राख्नु पर्ने भएपनि त्यहाँको भू बनोटको प्रत्यक्ष बैज्ञानिकद्धारा परिक्षण गराएर उनीहरुलाई पुर्नस्थापित गर्न आवश्यक छ । यसकालागि म सबै संघ संस्थालाई सहयोग गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु ।’
पहिरोले पालिकाको वडा नं. ४ को गोठगाउँ, जिरी र सार्कीटोल, पाँचको कालाखोली पाखा, ६ को धुमलगायतका क्षेत्रमा भीषण क्षति पुगेको बताए ।